समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी – ।।दाङ खबर।।
Home / ब्लग/विचार / समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी
समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी
२०७४, ४ मंसिर सोमबार ०६:५८	ब्लग/विचार, मुख्य समाचार
हरि रिजाल, उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्रनम्वर ३ नयाँशक्ति,
तपाईलाई भोट दिने किन ?
म युवा हुँ । म नयाँ युगको आवाज सुन्न र बुझ्न सक्छु । म राजनीतिलाई पेशा होइन सेवा गराउन चाहन्छु । मसँग समाजको अवस्थ बदल्न सक्ने दुरदृष्टि र योजना छ । ममा समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्न क्षमता र आँट छ । आजसम्मको राजनीतिले युवालाई राजनीतिमा घृणा जगायो । परम्परागत पुराना राजनीतिक दलहरुले राजनीतिलाई फोहोरी बनाए । म राजनीतिलाई सफा गर्न चाहन्छु । त्यसैले देशको समृद्धि र विकास, भावि पुस्ताको भविष्य उज्ज्वल देख्ने, भावि पुस्तालाई सुन्दर राजनीतिक संस्कार दिने इच्छा बोकेकाहरुले र यो देशमै आफ्ना छोराछोरी, बुहारी, नातीनातिनालाई आफ्नै काखमा देख्न चाहने आम मतदाताहरुले मलाई भोट दिने ।
तपाईले जित्ने आधार के ?
मैले जित्ने आधार भनेको, मैले भने बमोजिम मुख्य कुरा हुन् । त्यसमा पनि आजसम्मको परम्परागत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले गरेका गलत राष्ट्रघाती जनतामारा क्रियाक्लापहरु जसले यो देशलाई संसारकै गरिब र खोक्रो बनायो । युवालाई व्यरोजगार र विदेश पलायन हुन बाध्य बनायोर रोजगारी सृजना गर्ने कार्ययोजना बनाएन । यीनै कारणहरुले गर्दा मैले यसको समाधान र विकल्पमा उमेदवारी दिएको छु । म सधैभरी समाज र जनताको सेवाका लागि लागेको छु र लागि परिरहन्छु । त्यस कारण मैले जित्छु । अहिले पनि मेरो क्षेत्रमा मैले ५ सय भन्दा बढि व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएको छु भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा मैले सिर्जना गरेका संघसंस्था र कम्पनीहरुबाट पैतालिससय भन्दा बढि व्यक्तिहरुले आयआर्जन र जिविकोपार्जन गर्नुभएको छ । म सधै देश र समाजलाई प्राथमिकतामा राखी, फोहोरी राजनीतिलाई सफा गरी राजनीतिबाट समाज सेवाका लागि मेरो उमेदवारी भएको हुँदा, मैले निर्वाचन जित्नेछु । मेरो उमेदवारी सत्ता, शक्ति, धन, डन र भ्रष्ट सिन्डिकेट राजनीतिका बिरुद्ध हाम्रो अभियान, सुशासन, सदाचार, समृद्धि र विकासका पक्षमा आँखामा मतदान भन्ने अभियानका साथ भएको हुँदा पनि मैले जित्दछु ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा हुनुहुन्छ । मतदाताहरु के भन्छन् ?
मतदाताहरुमा निकै ठूलो निराशा पाए । म पहिलो पटक चुनावको सन्दर्भमा जनताको बीचमा छु । जनताले नेता भन्दा घृणा गर्दा रहेछन् । हामी त अब कसैलाई भोटै हाल्दैनौ भन्छन् । चुनावको बेला मात्र नेता देखिएर सबै गर्छौ भन्छौ, तर आजसम्म केही गरेनौ भन्दै ठूलो अविश्वास र घृणा व्यक्त गर्दा म जस्ता राजनीतिलाई सेवा गर्न आएकाहरुलाई समेत जनतालाई बुझाउन कठिन बनाइएको रहेछ ।
त्यसो भए तपाईले के भनेर उनीहरुको चित्त बुझाउनु भयो त ?
म राजनीति कमाई खाने पेशाका लागि नभएर म राजनीतिको फोहोरलाई सफा गर्न आएको स्वच्छ युवा हुँ । मेरो मानसिकतामा भ्रष्टाचार, कमिशन, समाजलाई ढाँट्ने कुरा, जनतालाई छल्ने, झुक्याउने उद्देश्य छैन । विश्वास गर्नुहोस्, अब नयाँ पुस्ताका युवाहरुले नै नयाँ युग र देशको नेतृत्व गरे मात्रै देश विकास हुन्छ र हामी र हाम्रा सन्तती सुखी हुन्छौं भनेर विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छु । अब कुनै पार्टीले जित्ने हार्ने भन्दा पनि देशले जित्ने हार्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । आजसम्म हामीले भोट हालेर दल र तीनका नेताहरुलाई जितायौं, तर हामीले हा¥यौं, देशले हा¥यो, भावी पुस्ताले हा¥यो, हाम्रो भविष्यले हा¥यो, त्यस कारण अब मन र मत बदलेनौं भने अरु बिस पच्चीस वर्ष हाम्रो देशले हार्नेछ, हाम्रो पुस्ताले हार्नेछ, भविष्यले हार्नेछ र हामीलाई हाम्रा सन्ततीले सराप्नेछन् । अब दोष केबल नेता र पुराना राजनीतिक दलहरुलाई थुपारेर हामी उमकन पाउँदैनौं । पटकपटक झुकिने, अनि भोलीबाट फेरि गाली गर्न थाल्ने यही गोलचक्करमा घुम्यौ भने अब दोष हामी जनताको पनि हुनेछ । त्यसैले बेलैमा मन बदलौं, आँखा खोलौ, र समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्ने योजना र खाका सहितको सक्षम व्यक्तिहरुलाई, सक्षम उमेदवारलाई मतदान गरौं ।
यहाँको पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गोरखामा कांग्रेसको समर्थनमा उठ्नु भएको छ । यहाँ किन तालमेल भएन ?
गोरखामा तालमेलको सम्भव भयो, गोरखाका कांग्रेसहरुले राष्ट्रका लागि बाबुरामको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो र त्यहाँ समर्थन भयो र तालमेल भयो । बाँकी ठाउँमा तालमेलको खासै बहस, छलफल र गृहकार्य नै हुन सकेन । त्यस कारण यहाँ तालमेल हुन सकेन ।
यतिबेला दाङलाई प्रदेशको राजनीति बनाउने भनेर अन्य उमेदवारहरुले भोट मागि रहेका छन्, यसमा यहाँको भनाई र योजना के छ ?
हाम्रो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत कुरा के हो भने, मैले यो भन्दा पहिले पनि सोसल मिडिया मार्फत पार्टीको धारणा राखेको छु । त्यो के हो भने हामी पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी दाङमै बनाउन प्रतिबद्ध छौं र यसको नाम पनि लुम्बीनी प्रदेश राखिनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी र मेरो स्पष्ट धारणा रहँदै आएको छ । भोली पनि रहनेछ । हामीले अरुले जस्तो भोट माग्ने केवल सस्तो नारा बनाउन चाहँदैनौ । हामी यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वय गर्ने सवालमा आवश्यक पर्दा जनतासँगै रहेर आन्दोलन गर्न समेत पछि हट्ने छैनौं । दाङलाई राजधानी बनाई सकेपछि दाङलाई प्रशासनिक केन्द्रकारुपमा विकास गर्ने र बुटवल, भैरहवा, लुम्बीनीलाई पर्यटन तथा व्यापारिक केन्द्रकारुपमा विकास गर्ने र नेपालगञ्ज, कोहलपुरलाई औद्योगिक शहरकारुपमा विकास गरी यो प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने हाम्रो पार्टीको लक्ष छ ।
अन्तमा केही भन्नुछ की ?
म आदरणीय मतदाताज्यूहरुमा सविनय निवेदन गर्न चाहन्छुकी, म समय, श्रोत, साधन र विभिन्न कारणले यहाँहरुको घरदैलोमा आउने चाहना राख्दाराख्दै पनि सकिन भने यहाँहरुले बुझि दिनुहुनेछ, र हाम्रोमा त आएन भन्ने गुनासो कृपया नगरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरुलाई आजसम्म आँखा चिम्म गरेर भोट हाल्यौ, हामीले हालेको भोटले व्यक्तिले त जित्यो, तर हामीले हालेको भोटले सधैभरी हारेको छ । हाम्रो देशको प्रमु दुश्मन गरिबी र व्यरोजगारी हो । आज गरिबी र व्यरोजगारीले जितेको छ । अब हाल्ने हाम्रो भोटले गरिबी र व्यरोजगारीलाई हराउनुछ । त्यस कारण हाम्रो भोट देशका नदीनाला, कलकारखाना, बिक्री गर्न सदुपयोग गरियो, लाखौ युवाहरुलाई व्यरोजगार बनाई, विदेशिन बाध्य बनायो । र हामी संसारकै गरिब र अपहेलित, अपमानित, स्वाभिमान गुमेका नागरिकको सूचीमा दर्ज गराउन प्रयोग भयौ । त्यस कारण हाम्रो भोटले हारेको छ । अब पनि आँखा खोलेनौ भने अझै बिस, पच्चीस वर्ष यही दुरदशामा हामी बस्न बाध्य हुनेछौं । त्यस कारण तपाईहरुले अब मन र मत बदलि आँखा खोली, समृद्धि र विकासको प्रतिक आँखा चिन्हमा मतदान गरी मलाई बिजयी गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
२०७४, ४ मंसिर सोमबार ०६:५८
Previous हृदयघातका यी हुन् अदृश्य कारण
Next नव्वे वर्षियलाई साक्षी राखेर पोख्रेलले भने-कम्युनिष्टलाई बहुमत दिनुहोस् भत्ता पाँच हजार पुर्याउँछौं